Antoko politika – Politika
Étiquette : <span>Antoko politika</span>
Home Antoko politika
24 août 20197 mai 2020Tafatafa
« Vonona handany vehivavy ny mpifidy » Nitombo an-dalana ny fahazoan’ny vehivavy toerana eny anivon’ny rafitra politika, ka singanina amin’ireny ny ao amin’ny antenimierampirenena, taona vitsivitsy izao. Na izany aza, mbola ilàna ezaka ny fampitoviana lenta ny lahy sy ny vavy eto amin’ny firenena, ka mitondra ny heviny momba izany Ravaozanany Noroarisoa. Manao ahoana ny fahitanao ny...
24 août 20197 mai 2020Politika
Na dia heverina aza fa latsa-danja manoloana ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ny fifidianana solombavambahoaka ho avy io dia anisan’ny fotoana iray hampiasan’ny kandidà enti-manana mihoampampana, na vola io na fitaovana. Manoloana ny resabe ateraky ny ahiahy ny mety tsy fangaraharahan’ny famatsiam-bola ny fampielezan-kevitra, manolotra soso-kevitra hoenti-mamaha ny olana ity mpandinika politika ity. teraka resabe...
20 août 20197 mai 2020Politika
Fifidianana, mizotra mankany amin’ny fifidianana ben’ny tanàna
Vita iny ny fifidianana solombavambahoaka. Fifidianana ben’ny tanàna no dingana manaraka. Ho tapitra amin’ny volana jolay ny fe-potona iasan’ny ben’ny tanàna. Raha misy fahabangana eo amin’ny toeran’ny ben’ny tanàna dia manan-jo ny fahefana mpanatanteraka hanendry Filohan’ny delegasiona manokana (PDS) izay hiandraikitra ny raharaha mandritra ny fotoana tsy mahaeo ny ben’ny tanàna. Mandritra izany fotoana izany...
1 mai 20197 mai 2020Politika
Kandidà tsy miankina, ny didin’ny mahaleo tena
Mahazo laka ny kandidà tsy miankina amin’ny fifidianana rehetra. Taratry ny fihen-danjan’ny antoko politika, nefa safidy sy tetik’ady politika ihany koa. 517 kandidà amin’ny 803 no mahaleo tena amin’ny fifidianana solombavambahoaka izay ho avy. Efa nampoizina ihany fa harefo ny antoko politika amin’ity fifidianana ity, nefa lalina tanteraka ny hadirin’ny lavaka misy azy ireo. Raha...
1 mai 20197 mai 2020Tafatafa
Tafatafa tamin-dRojovola Bora
« Nampiasain’ny mpanao politika ho fitaovana fampanan-karena tampoka ny toerana maha olom-boafidy » ­ Ny momba ny hery hisongadina eny anivon’ny antenimierampirenena, ny isan’ny nirotsaka hofidiana, ny fandraisana andraikitry ny tanora… Manome antsika ny heviny ity mpitsara ity. Manao ahoana ny fahitanao ireo karazan-kery politika misy ao anatin’ny fifidianana Solombavambahoaka ? Voalohany indrindra, tsy azo...